राहुल-स्मिता पुन,र्मिलनबारे ‘समाजका क:लंकहरुको नाश होस्’ भन्दै महावीर पुनले यस्तो लेखे (स्टा;टस सहित) – Ap Nepal
केहि दिन पहिला मात्र युट्यु’वमा श्रीमती हराएका एक लाहुरे फेला पर्यो । आफु पल्टनमा रहँदै १ महिना देखि श्रीमती बेपत्ता रहेको भन्दै युट्यु’वको अन्तरव’र्तामा आए । युट्युब अन्त’रवार्ता पश्चात उनको श्रीमती काठमाण्डौको एक होटलमा अर्कै केटा सँग फेला पर्यो ।
माया जालझेलमा पारी आफुलाई त्यहाँ सम्म पुराए’को लाहुरेको श्रीमतीले स्मिताले बताईन् । गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका ९ का राहुल गुरुङ र राहुलको श्रीमती स्मि’ता गुरुङले बिभिन्न समस्या’लाई चुनौती दिँदै फेरी आफ्नो अमुल्य जिवनलाई अघि बढाए’को छ ।
१ महिनाको लामो खोज’तलास पश्चात श्रीमती भेढ्दा मात्रै पनि राहुलको मनामा शान्ति भएको थियो । माईती परिवा’रबाट छोरीको चिन्ता गरिरहेको माईती परि’वारले छोरी तत्काल खोज्न अनुरोध गरि’रहेका थिए । अन्तवार्तामै उनले माइती पक्ष बाट टेन्सन भईरहेको बताएका थिए ।
राहुलले जाहाँ छौ जस्तौ छौ हामि’लाई जानकारी गाराउ हामिलाई ढुक्क त हुन्छ भनेर अन्तरवा’र्तामै पनि श्रीमतीलाई अनुरोध गरेका थिए । राहुलको बिभिन्न चिन्ता मनमा खेलीर’हेको थियो । काहाँ के बनायोकी यसको दोष आफुमा आ’ईलाग्ने होकी भन्ने बिषयले टेन्सन भएको उनले जसरी पनि कन्ट्याक्टमा आउन श्रीमती’लाई अनुरोध गरे ।
नभन्दै काठमाण्डौको एक होटल’बाट फोन आयो । होट’लमा एक सामाजिक संञ्जा’लमा चिनजान भएको इन्जिनियर बताउने नारायन नाम गरेको एक व्यक्ति सँग फेला पर्यो । उनले त्यो व्यक्तिले आफु’लाई दुरुपयोग गर्न लगेका रहेछन् भन्ने कुरा पछि मात्र पत्ता पाएको सामाजिक संञ्जालहरुमा प्रति’क्रिया दिएकी छिन् । स्मिताले आ’फुलाई बेच्न लगेको रहेछ भन्ने प्रहरी बयान समेत भनिन् ।
राहुल र अस्मि’ताको भन्दा पनि ३ बर्षिय छोरीको भबिष्यका लागि एक महान लाहुरेले फेरी पनि आफ्नो श्रीमति’लाई साथ दिने निर्णय गरे । यो निर्णयले छोरीको मायामा ब्याप्त रहेको राहुल र अस्मिता’को दम्पती परिवार मात्रै नभई समा’जमै खुसीको ओईरो छाएको छ । अझै यस्तै पिडित पात्रहरु त धेरैनै भावुक र खुसी भएको छन् ।
एक निर्दोष बच्चा आमा बाबुको गलत निर्ण’यका कारण गल्तिको सजायको भागेदार बन्नु पर्ने अवस्थाबाट बन्चित गरा’उँदै पुरानो गल्तीलाई बिर्सेर बाँकी जि’न्दागी सफल बनाउने निर्णयमा ति दम्पतीले पुर्नमिलनको माहान निर्णय गरे । उनिह’रुको निर्णय’प्रति सबैले सकरा’त्म निर्णय भनेका छन् । आउँने दिनहरुमा भने यस्तो गल्ती बाट टाडै रहन स्मितालाई अनुरोध गर्दै बाँकी पारिवारि’क जिन्दागिलाई सफल पार्न सबैले अनुरोधका साथ बधाई दिइए’का छन् ।
राहुल र स्मिताको दम्पतीलाई पालुङटार नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष भेषराज पाण्डेले खादा लगाईदिएर पुनर्मिलनको लागि बधाई दिएका छन् । आज समाजका एक महान जोडिएको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै राष्ट्रमै यो उदाहरणीय कार्य रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले दुवैजनालाई पुनरर्मि:लनको संज्ञा दिदैँ शुभ’कामना व्यक्त गरे । अध्यक्ष पाण्डेले ‘बिषेशगरी उहाँहरुको बच्चाका लागि पुनर्मिलन जोड गरेको बताए । हामीले देखा’उनका लागि मात्रै की मनबाटै हो ? भनेर दुवैलाई सोध्दा दुवै:बाट स्वीकार्न राहुल र स्मि’ता मन्जुर भए, त्यसपछि हामिले पुनर्मिलन गराएको छौ अध्य:क्ष पाण्डेले भने ।’
३ बर्षको छोरीसमेत भएकी स्मिताले परपु’रुषसँग भागेपछि तनावमा रहेका राहुलसँग बिवाहको प्रस्ताव गर्दै धेरै युवतीले प्रस्ताव समेत गरेको बताइएको थियो । तर शुक्रबार राहुल र स्मिता’बीच नै पुनर्मिलन भएको छ । उनीहरुबीच पुन’र्मिलन भएपछि सोही वडा’मार्फत विवाह दर्ता गराइएको हो ।
त्यस्तै लाहुरे दम्प’तीको पुनर्मि’लन भएपछी राष्ट्रिय आविस्का’र केन्द्रका अध्यक्ष डा.महावीर पुनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । पुनले लेखेका छन् । बिस्तृत रुपमा सबै कथा ता पढ्न पाएको छैन तर अन्तिम कु’रा बुझ्दा यो राहुल भाई ज्यादै बिशाल हृदय भ’एको मानव र’हेछन भन्ने कुरा पक्का भयो र यस्ता मान्छे करो’डौमा एक दुइ जना मात्र हुन्छन ।
यस्तो निर्णय गर्ने सा’हस साधारण मान्छे:लाई आउंदै आउंदैन अनि स्मिता बहिनीले पनि भुल स्वीकार गरेर गल्ती बाट पाठ सिकेको बुझियो, त्यो पनि असल मानि’समा हुनै पर्ने गुण हो । एक जना मान्छेले जीवनमा हजारौं गल्ति गर्छ तर त्यो गल्ति बाट पाठ सिक्ने हो भने गल्ति गरेकोमा केहि फरक पर्दैन बरु फा’इदा नै हुन्छ । दुबैको जय होस् र समा’जका कलंक’हरुको नाश होस् ।
Prevआज ह्वात्तै घट्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस कुन देशको कति ?
Nextसिधाकुरा वि’वादबारे रवी लामिछानेले बल्ल मुख खोले भन्छन्: ”म नबोली यो लडाई जित्न चाहन्छु” (भिडियो सहित)
आहा ! तिजमा रातो साडिमा सजिएर अनिताले यसरी मागिन आफ्ना श्रीमान् बिनोदका लागी आयु ( भिडियो सहित)
आज ह्वा’त्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुदैछ त कारोवार ?